Voasaringotra amina vono olona Zandary iray nidoboka am-ponja
Zandary iray, kilasy faharoa, niasa tao amin’ny Brigady Anahidrano any Antsohihy no nampidirina am-ponja vonjimaika ny 4 mey 2020.
Voarohirohy amina raharaha vono olona izy, kanefa nitsoaka ka nampitombo ny ahiahy. Tratra ary nalefa any am-ponja miandry ny tohiny. Nahatratra 84 ireo zandary nidoboka am-ponja nandritra ny taona, noho ny fandikan-dalàna sy heloka bevava vitany, araka ny tatitra teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Hatramin’ny fiandohan’ity taona 2020 ity, dia efa nisy 35 ireo zandary namoahana taratasy fanenjehana. 18 notanana am-ponja vonjimaika, 8 nahazo fahafahana vonjimaika. Zandary 1 nahazo fahafahana. Misy 3 ireo raharaha efa vita famotorana ka hatolotra ny Fitsarana, ary misy dosie 5 hafa an-dalam-panaovana famotorana amin’izao fotoana izao. Tsy mitsitsy ny eo anivon’ny fiadidian’ny zandarimariam-pirenena eo anatrehan’ny fihoaram-pefy ataon’ireo zandary.